လူမိုက်ခေါင်းဆောင် သခင်ဘသောင်း(သို့မဟုတ်) သခင်ပါတီရဲ့ ဖန်ဆင်းရှင် - booksmyanmar
လူမိုက်ခေါင်းဆောင် သခင်ဘသောင်း(သို့မဟုတ်) သခင်ပါတီရဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်
ဟောဟိုမှာထာဝရဘုရား လာနေပြီ !!သူပေါ့ကွ !ငါတို့သခင်အဖွဲ့ကို ဖန်ဆင်းတာ !အေး…..သူ့ကိုကြောက်ရသကွ”လို့ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းကပြောလိုက်တယ်။ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းကတောင်ဒီလို အသိအမှတ်ပြုရည်ညွန်းချီးမွမ်းခံရသူကအခြားသူ မဟုတ်။
သခင်ပါတီလို့ အများခေါ်ကြတဲ့တို့ဗမာအစည်းအရုံးကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရာမှာပါဝင်ခဲ့သူသခင်ဘသောင်းပါပဲ။ဆရာကြီးမှိုင်းကတော့၁၉၃၀ မှာ တို့ဗမာအစည်းအရုံးပေါ်ပြီးနောက်ထပ် ၅ နှစ်လောက်အကြာရေနံချောင်းညီလာခံကျမှသခင်ပါတီကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာ​ ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ဘသောင်းကနတ်မောက်မြို့၊ ဂွေးချိုဒိုင်ဖုန်းကုန်းရွာမှာ၁၉၀၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ရက်​နေ့ဖွားမြင်ခဲ့တဲ့သူ။
အဖဦးမြင့်၊ အမိဒေါ်လေးခင်တို့ကမွေးတဲ့မွေးချင်းလေးယောက်အနက်ဒုတိယမြောက်သား။ဘာသာပြန်စာပေပြိုင်ပွဲလုပ်ရာမှာသခင်ဘသောင်းက ၅ ကြိမ်ဆက်တိုက်ဆုရလို့ဆက်လက် ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်မပေးတော့ဘဲသူ့ကိုခေါ်ယူပြီးအဲ့ဒီ ဂန္ထလောကဂျာနယ်ရဲ့အယ်ဒီတာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အထိအဂ်လိပ်စာနိုင်နင်းတယ်။
ဘာသာပြန်တဲ့နေရာ လူရည်ချွန်ဖြစ်လို့တက္ကသိုလ်မှာဘာသာပြန်နည်းပြဆရာအလုပ်ရခဲ့တဲ့သူပါ။၁၀ တန်းမအောင်ဘဲတက္ကသိုလ်ဆရာဖြစ်လာတဲ့ခေတ်ပညာတတ်ဆိုလို့ သူတစ်ဦးပဲ ရှိတယ်။ကောလိပ်ကျောင်းဝင်းထဲက သူ့ရုံးခန်းရှိရာလံချားစီးဝင်လာတာကိုဒရဝမ်က ရိုင်းရိုင်းပျပျဆီးတားတဲ့အခါသူက မြန်မာဖြစ်နေလို့ အတားခံရတာ။
မျက်နှာဖြူသာဆိုရင်ဆလံတောင်ပေးဦးမှာလို့တွေးပြီးအဲ့ဒီဒရဝမ်ရဲ့ ရင်ဘတ်ကိုခြေနဲ့ဆောင့်ကန်ခဲ့တယ်။သူက အဲ့ဒီလိုလူ။ဂျာမဏီက ပါမောက္ခနီချေးရဲ့ခရစ်ယာန်ဆန့်ကျင်ရေးကျမ်းတွေကိုသူက တိမ်းညွတ်တယ်။”နှိမ့်ချသူများသည် မဂ်လာရှိ၏။ကောင်းကင်ဘုံသည်သည်းခံသူများအတွက်ဖြစ်၏”ခရစ်တော်ရဲ့ဒီလိုအဟောတွေကဖိနှပ်သူနယ်ချဲ့ဘက် လိုက်ဟန်တူတယ်။
“နယ်ချဲ့က အဆုံးအစမရှိလွှမ်းမိုးသမျှကာလပတ်လုံးမြန်မာကျေးကျွန်တွေက ကုန်းခံကြ”ဆိုပြီးသြဝါဒပေးသလို ဖြစ်နေတယ်။ဒီအယူအဆမျိုး လက်မခံတဲ့နီချေးကိုသူကထောက်ခံတဲ့အတွက်”ကြောက်တတ်ရင် ဝန်ကင်း”အစား”လာမယ့်ဘေး ​ပြေးတွေ့”ဆိုတဲ့သခင်ကျင့်ဝတ်ကို တီထွင်ခဲ့တာပါ။
အိမ်နီးချင်းအဂ်လန်ကနှစ်ပေါင်း (၈၀၀)ကျွန်လုပ်ထားရာကနေပုန်ကန်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အိုင်ယာလန်က “ရှင်ဖိန်း”လို့ခေါ်တဲ့တော်လှန်ရေးမျိုးချစ်တွေရဲ့ရှင်ဖိန်းစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းသခင်ဘသောင်း အတူယူခဲ့တယ်။အိုင်ယာလန်ဝေါဟာရ”ရှင်ဖိန်း”က”ငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်သာ”လို့အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။အဲ့ဒီကနေ”ဒါတို့ပြေ ……ဒါတို့မြေ……ဒါ ငါတို့ပြေ” ကိုစတင်ခံတွင်းတွေ့လာတာ။
မြန်မာ့ထုံးတမ်းစဥ်လာအရအရွယ်အလိုက်”မောင်၊ကို၊ဦး “တပ်ခေါ်နေရတဲ့အစားအဂ်လိပ်နာမည်တွေရဲရှေ့မစ္စတာတပ်ခေါ်သလိုကြီးကြီးငယ်ငယ်သခင်”တပ်ခေါ်ရင် ရှင်းမယ်။ပညတ်သွားရာဓာတ်သက်ပါဆိုသလိုသခင်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းပြောင်းရင်ဗမာတွေကျွန်စိတ်ပျောက်မယ်လို့သခင်ဘသောင်းကပြောတယ်။
သူက တို့ဗမာအစည်းအရုံးကို၁၉၃၀ မေလမှာဆန္ဒတူလူငယ် တချို့နဲ့အတူစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တယ်။၁၉၃၀ မေ ၃၀ မှာမျိုးချစ်လှုံ့ဆော်​ရေးစာတစ်စောင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး”ဗမာပြည်သည် တို့ပြည်ဗမာစာသည် တို့စာဗမာစကားသည် တို့စကားဗမာပြည်ကို ချစ်ပါဗမာစာကို ချီးမြှင့်ပါဗမာစကားကို လေးစားပါ”ဆိုတဲ့တို့ဗမာစာတမ်းကို ပြည်သူလူထုကြားစတင်ဖြန့်ဝေခဲ့တယ်။၁၉၃၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတို့ဗမာသတင်းစဥ်မှတ်တမ်းထဲမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ စာတိုလေးရှိပါတယ်။
လိမ္မာသည်ဆိုခြင်းမှာသူရဲဘောနည်းခြင်း၊ ကြောက်ခြင်း ၊သွေးမရှိခြင်း ၊သတ္တိမဲဲ့​ခြင်းဒူးတုန်ခြင်း ၊ တစ်ကိုယ်ကောင်ကြံခြင်း ၊အမေနှင်ငါ မာလျှင်ပြီးရောဆိုသော စိတ်ရှိခြင်း ၊ကိုယ့်အိမ်မှ ကိုယ့်အိမ်မှတ်ခြင်း ၊ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်ခြင်း ၊ရှေ့ လာမည့်ဘေးကိုစည်းလုံး၍ ခုခံရမှန်းမသိခြင်း ဖြစ်ပါမူအိုအချင်းတို့ !!
ငါတို့သည် မလိမ္မာလိုပါပြီ !!မိုက်သာ မိုက်လိုပါ၏။ငါတို့အား မိုက်ခြင်းကို ပြု​ကြပါကုန် !!ငါတို့ မိုက်ပါရစေ “တဲ့။ဆရာကြီးသခင်ဘသောင်း ရေးခဲ့တဲ့လုံးချင်းစာအုပ် (၄၉)အုပ်ထဲကထင်ရှားတာတွေကဆရာဝန်ပါပဲ ပြဇာတ်(၁၉၂၈) ၊ ပန်းသာမစာဥ (၁၉၃၈)၊ခြေလေးချောင်းတော်လှန်ရေး(၁၉၅၁)၊မျက်မမြင်တိုင်းပြည် (၁၉၅၅)၊တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်များ (၁၉၅၁)စတာတွေပါ။
ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်ရင်း၁၉၈၁ ခုနှစ် ဧပြီလ၂၁ ရက်နေ့ကွယ်လွန်တဲ့အချိန်ဆရာကြီး သခင်ဘသောင်းကအသက် (၈၀)နှစ်ရှိနေပါပြီ။မြန်မာလူငယ်တွေအတွက်စံပြုအတုယူထိုက်တဲ့ထင်ရှားကျော်စောသူလူတော်တစ်ဦးအနေနဲ့ကော၊မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာသခင်တစ်ခေတ်ကို ဖန်ဆင်းခဲ့သူအဖြစ်ပါဆရာကြီးကို သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်။
ဆရာကြီးကလူဆိုတာ နိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းလို့မရဘူး။လူတိုင်း လူတိုင်းနိုင်ငံရေးလုပ်ရမယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့သူပါ။သခင်ပါတီကို ဖန်ဆင်းခဲ့သူဆရာကြီးသခင်ဘသောင်းရဲ့တိုသလောက် ထိမိလွန်းလှတဲ့ စကားလေးနဲ့ပဲအခုစာစုအားနိဂုံးကမ္ပာတ် အဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်။”လူမှန်လို့ ရှိရင်နိုင်ငံရေးမှာ စိတ်ဝင်စားရမယ်။နိုင်ငံရေးလုပ်ရမယ်။
နိုင်ငံရေးမှာ စိတ်မဝင်စားသူ၊နိုင်ငံရေး မလုပ်သူတွေဟာ”နတ်”ရင်လည်းဖြစ်ရမယ်။”နွား”ရင်လည်းဖြစ်ရမယ်”တဲ့။
ကိုးကား၁-ညိုမြရေး-မြန်မာနိုင်ငံတွင်သခင်ခေတ်ကိုတီထွင်ခဲ့သူသခင်ဘသောင်းနိဒါန်း၂- သန်းဝင်းလှိုင်ရေး -မြန်မာ့သမိုင်းတစ်ကွေ့မှ ဆရာကြီးသခင်ဘသောင်း